Intombi kaTarek El Moussa uTaylor uthi wayenonxibelelwano olukhawulezileyo noHeather Rae Young - Indlela Yokuphila
Intombi kaTarek El Moussa uTaylor uthi wayenonxibelelwano olukhawulezileyo noHeather Rae Young
UHeather Rae oselulaI-Instagram
Ukuskena ngokukhawuleza UHeather Rae oselula Imithombo yeendaba kwezentlalo ityhila indlela akuthanda ngayo ukuchitha ixesha nabantwana bakaTarek El Moussa, uTaylor Reese kunye noBrayden James, abelana naye nowayesakuba ngumfazi wakhe UChristina Anstead . Kunye neefoto ezithandekayo zosapho oludibeneyo kunye neTarek, ulutsha luyangxama malunga nabo. Ukuba uncumo lwakhe olukhulu kuzo zonke ezo foto bezingezizo izalathiso ezicacileyo, uTaylor usandula ukuveza ukuba wonwabile malunga nolwalamano kunye nomama wakhe oza kuba ngumtshato.
Kwikliphu entsha Icala laseTarek, Miniseries eyaqala yenziwa ukufumanisa + NgoMvulo, uTaylor wabelana ngendlela avakalelwa ngayo ngoLutsha. 'Ukuqala kwam ukudibana noHeather, ndaziva ndisiba nobu budlelwane kunye naye, utshilo uTaylor kwikliphu, ekwabelwana ngayo kuphela Abantu kwiphephancwadi . 'Ulunge kakhulu, wenza zonke ezi zinto zilungileyo. Ngoyena ulungileyo. Ndiyathanda ukuhlala naye. '
Lo mxholo ungeniswe kwi-Instagram. Unokwazi ukufumana umxholo ofanayo kwenye ifomathi, okanye unokufumana ulwazi oluthe kratya, kwiwebhusayithi yabo.
Isithuba esabiwe nguHeather Rae Young (@heatherraeyoung)
imibono elula yokutya kwe-halloween
Ngelixa benolwalamano olomeleleyo, uTaylor kunye noLutsha abavumelani ngento enye: Iindevu zikaTarek. 'UTaylor akazithandi iindevu,' utshilo uTarek ngokuhleka kwiklip. Ndibe nale ndevu iinyanga zine okanye zintlanu. UHeather uyazithanda iindevu. UTaylor uyayicaphukela intshebe. Kukho umlo endlwini phakathi kukaHeather noTaylor malunga nentshebe. '
Ngaba ufuna ukwazi ngakumbi ngeTarek kunye nosapho oluxubileyo? Thatha zonke iziqendu ezine ze Icala leTarek Flip ekufumaniseni +, kulapho ke Chip kunye noJoanna Gaines's Magnolia Network uthotho nazo ziyafumaneka ukujonga kwangaphambili. Imirhumo kwinkonzo entsha yokusasaza ukuqala nge- $ 4.99 ngenyanga.
izimvo zokulala ezihleliweyo kwigumbi lokulala
Izipho ezinkulu ze-valentines zakhe
Izicwangciso zetheyibhile zetheko lesidlo sangokuhlwa
phantsi kwezimvo zomququzeleli wesink